Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ahoana ny fomba ahazoana Adobe Premiere Pro maimaim-poana
PREMIERE PRO MAIMAIMPOANA
Mbola tsy mahalala ny fomba hahazoana Adobe Premiere Pro maimaimpoana nefa tsy misintona kinova piraty? Te-hametraka an'ity programa tsara indrindra ity amin'ny famoahana horonantsary tsy misy famandrihana $ 21 isam-bolana? Amin'ity lahatsoratra ity dia hilazako aminao ny fomba fampiasana maimaim-poana ny Adobe Premiere ary koa ny antony tokony hampijanonanao ny fampidinana ireo rakitra falehan-driaka.
Tombontsoa maimaim-poana Adobe Premiere Pro:
itaovana fandaminana maro
Zoro multi-cam tsy voafetra
Fanampiana tsara kokoa ho an'ilay horonantsary 360-degree
Hanova horonantsary ve ity Premiere Pro CC Free Trial ity amin'ny macOS sy Windows?
JEREO PREMIERE PRO FREE FITSARANA
Ohatrinona ny vidin'ny Premiere Pro?
Ny vidiny dia $ 20,99 / volana. Ny safidy famandrihana faharoa dia ny Adobe Cloud All Apps, izay mitentina $ 52,99 / volana. Ity set ity dia misy ny Adobe Premiere Pro CC 2022 , After Effects, ary koa fanangonana birao famoronana 20+ sy fampiharana finday.
Ahoana ny fanovana ny premiere Pro maimaimpoana ho mpikambana mandoa vola?
Toy ny mahazatra, ny mpampiasa dia mahazo fampandrenesana fa ilaina ny mividy kinova feno amin'ilay programa aorian'ny fotoana fitsapana. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny manafatra famandrihana karama amin'ny tranokala Adobe ofisialy.
Azoko atao ve ny misintona ny kinova Premiere Pro Free Trial amin'ity taona ity raha efa nampiasa an'ity programa ity maimaim-poana tamin'ny taon-dasa?
Ie. Ireo mpampiasa dia mahazo fe-potoana fitsapana 7 andro.
Aiza no ahitako lesona Premiere Pro?
Hijery horonantsary ao amin'ny YouTube. Raha te hamaky ny literatiora manokana momba ny fampiasana ny Premiere maimaimpoana ianao dia mandehana any amin'ny torolàlana mpampiasa Adobe ofisialy.
JEREO NY LESONA MAIMAIMPOANA
Fomba iray hafa hampiasana Adobe Premiere Pro
Adobe Co. dia efa ela no namolavola andiany kinova tsotsotra an'ny programa famoronana izay antsoin'izy ireo hoe E Element. Izy ireo dia manana ny fiasan'ny mpampiasa matetika indrindra sy ny interface tsotra ka ny vao manomboka na ireo izay tsy mila tsotra ny asan'ny programa dia afaka mampiasa ny vokatra tsy misy olana.
Fandraisana tsotra sy mazava
Vokatry ny horonantsary betsaka
Fanovana Audio mahery
Fanaraha-maso tsara ny fametrahana fitoniana
Ny rindrambaiko Premiere Element dia misy ny singa Premiere Pro tena ilaina ilaina amin'ny fanitsiana horonantsary fototra sy ny fanoratana loko. Izy io dia nohamarinina tanteraka ho an'ny mpankafy ary ny fepetra takian'ny rafitra dia tsy toy ny Premiere Pro CC. Elemen'ny Adobe Premiere 2022 dia mety indrindra ho an'ny olona te-hanao sarimihetsika ao an-trano mba zaraina amin'ny namana, saingy tsy manana traikefa fanovana horonantsary firy.
Tsy fahatokisan-tena amin'ny fampiasana Pirated Premiere Pro Version
Aza matoky ireo bilaogera miresaka momba ny kinova Adobe Premiere Pro maimaim-poana “ara-dalàna” ao amin'ny lahatsarin'izy ireo, izay azo raisina amin'ny alàlan'ny fisintomana ilay programa amin'ireo tranonkala hafahafa.
Inona no mitranga raha misintona rindrambaiko vaky aho?
Ny fampidinana rindrambaiko piraty dia mitaky andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ny sazy dia matetika eo amin'ny $ 1.500. Ho fanampin'izay, ny mpaninjara ofisialy dia mety handà ny hiara-miasa amin'ny solosaina nametrahana rindrambaiko piraty.
Inona no hampiato ahy amin'ny fampiasana rindrambaiko vaky?
Ny antony voalohany dia ny kaody lozisialy sy ny virus izay ampitaina amin'ny alàlan'ireo tranonkala manaparitaka rindrambaiko tsy misy fahazoan-dàlana. Raha misintona rindrambaiko tsy ara-dalàna ianao, dia mety hiharan-doza amin'ny PC amin'ny alàlan'ny keyloggers, programa fangalarana tenimiafina ary lesoka algorithm.
Inona no tokony hialako rehefa mividy rindrambaiko?
Ny varotra an-tserasera matetika dia mivarotra rindrambaiko efa niasa sy navadika taloha. Tokony hijery ny tranokala vaovao mivarotra ny zava-drehetra koa ianao.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny rindrambaiko manana fahazoan-dàlana?
Tsy havela irery ianao hanana ilay olana raha misy manjo ny solosainao. Ny rindrambaiko fahazoan-dàlana iray dia manome ny mety hanavaozana hatrany ny programa ary hisorohana ny tsy fahombiazana.
UPDATE PREMIERE PRO MAIMAIMPOANA
Aiza no hividianako rindrambaiko fahazoan-dàlana?
Aleo mividy rindrambaiko amin'ny tranokala Adobe ofisialy na mpiara-miasa amin'i Adobe ihany.
Premiere Pro Free Alternatives
Misy ny fiheveran-diso fa raha te-ho mpilalao horonantsary matihanina ianao dia mila mandoa ny rindrambaiko. Raha tsy izany dia tsy handeha lavitra mihoatra ny Windows Movie Maker ianao. Te-hisarika anao aho satria afaka mahazo rindrambaiko tena matihanina amin'ny fomba ara-dalàna ianao ary afaka maimaim-poana. Betsaka ny analogie Premiere Pro izay hanao asa amin'ny ambaratonga mitovy nefa tsy misy fandoavam-bola fanampiny.
MAMPIASÀ DAVINCE RESOLVE MAIMAIMPOANA
Ny fahaizany mampifanaraka ny horonantsary sy ny feo
Fandraisana tsotra sy manaitra
Fampisehoana famoahana loko marevaka
Ireo mpampiasa dia afaka mampihatra safidy multi cam amin'ny famoronana
Mitaky solosaina avo lenta izany
Tsy manome rohy mavitrika amin'ny sehatra After Effects
DaVinci Resolve Lite 17 dia analogy maimaim-poana an'ny Adobe Premiere. Izy io dia kinova tsotsotra an'ny tonian-dahatsary karama DaVinci Resolve. Ny fampiharana dia mifantoka amin'ny fanitsiana loko miloko amin'ny horonantsary horonantsary, saingy afaka manova karazana horonan-tsary ianao amin'ny alàlan'ny fanampiany. Ity no tonian-dahatsoratry ny matihanina ary ho hitanao eo noho eo izany amin'ny kalitaon'ny interface sy amin'ny fampiasa azy.
Ny DaVinci Resolve Lite dia tsy misy sivana horonantsary marobe, satria mpanitsy loko indrindra izy io, saingy ny fanohanan'ny OpenFX no mamaha ity olana ity. Azonao atao ny misintona sy mametraka sivana horonan-tsary fanampiny. NewBlueFX na Red Giant filters dia mety ho mety amin'ity programa ity. Vokatr'izany dia ho azonao atao ny manitatra ny fampiasa arak'izay takinao.
Vakio bebe kokoa momba ny rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra.
MAMPIASÀ NUKE MAIMAIMPOANA
Fitaovana feno amin'ny famolavolana fototra
Rafitra 3D avo lenta
Fitaovana fianarana tsara
Tsy misy fanohanana Mac OS X 10.5
Safidy plug-in voafetra
Fitaovana sary mihetsika-ratsy
Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fomba hahazoana Adobe Premiere Pro maimaim-poana, dia manoro hevitra anao aho handinika ny fampiasana an'io safidy maimaim-poana io. Nuke dia mpamoaka horonantsary matihanina amin'ny kilasy avo indrindra, izay nampiasaina hamoronana sarimihetsika toa an'i Avatar, King Kong, I, Robot, Tron, ary The Hobbit. Ny rindrambaiko dia azo ampiasaina amin'ny tanjona manokana sy fanabeazana maimaim-poana.
Ny interface interface dia tsy toa editera mahazatra. Ny horonan-tsary dia tsy eo amin'ny fizotry ny fotoana, fa eo amin'ny sary eto.
Mifandray ireo tampon'ny sary, amin'izay dia mamorona ny sarimihetsika farany. Tsara ny manamarika fa mitaky solosaina matanjaka ny programa. Nuke dia misy sivana marobe ho an'ny effets post-processing, tetezamita, 3D ary ny fanovana. Ny paramètre effets tsirairay avy dia azo ampidirina amina keyframes maromaro. Nuke dia tonian-dahatsoratry ny horonantsary matanjaka, izay toa sarotra loatra ho an'ireo mpampiasa vao, nefa azo antoka fa mety ho an'ireo mpanova horonantsary efa za-draharaha.
MAMPIASÀ SHOTCUT MAIMAIMPOANA
Mora ampiasaina ny interface interface maoderina
Supported be dia be ny endrika fanondranana sy fanafarana
Ny tutorial sy ny antontan-taratasy ofisialy dia anemika kely
Tsy manana be dia be ny tetezamita mahery vaika sy ny vokatra atolotry ny rindrambaiko hafa
Shotcut dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana maimaimpoana. Hanampy amin'ny famoronana horonantsary mampiasa horonantsary maro voarakitra izany. Ho fanampin'izay, ny fampiharana dia manohana sivana horonan-tsary sy feo marobe. Ohatra, azonao atao ny manitsy ny fifandanjana fotsy, manamboatra fanitsian-doko, na mametaka lahatsoratra nofaritan'ny marika HTML. Ny Shotcut dia manohana endrika maro noho ny fampiasana FFMpeg.
Ity dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana tena tsara miaraka amina fiasa marobe. Azonao atao ny mamorona sarimihetsika kely miaraka aminy. Tombony iray hafa koa ny fanatsarana hatrany ny programa sy ny fanitsiana ny lesoka. Tsy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo safidy Adobe Premiere Pro CC 2022 tsara indrindra.
Zahao bebe kokoa momba Sony Vegas vs Adobe Premiere.
Mpampiasa interface tsara
Azo alaina ho an'ny Linux, Windows ary Mac
Làlana / sosona tsy voafetra
Ny endri-javatra mamorona sary mihetsika 3D dia tsy endri-javatra namboarina
Olana amin'ny Ubuntu 9.10
OpenShot dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana maimaimpoana hafa. Namboarina ho an'ny Linux izy io, saingy misy safidy ho an'ny Windows sy Mac OS X misy ankehitriny. Ny mpamoaka horonantsary dia manana interface tsotra, ao anatin'izany ny fikandrana mialoha, ny fandaharam-potoana ary ny lisitr'ireo rakitra nohafarana. OpenShot dia manohana endrika video marobe (mampiasa FFmpeg). Ho fanampin'izany, ny mpamoaka horonantsary dia misy ny effets sy transients, ary koa ny utilities amin'ny famoronana lahatsoratra sy sary mihetsika 3D.
Hijery misimisy kokoa momba Ahoana ny fomba ahazoana maimaim-poana ny Adobe After Effects ary ampiasao izany amin'ny famoronana sary tsy mahazatra.
MAMPIASÀ SPLICE MAIMAIMPOANA
Tsotra be ny fampiasana azy
Manana tranomboky feo marobe ny fampiharana
Misy tetezamita vitsivitsy azo isafidianana
Azonao atao ny mampakatra mivantana amin'ny YouTube, Facebook, ary Instagram
Tsy misy amin'ny Android izy io
Ny mozika sasany dia zon'ny mpamorona
Splice dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana tsara ho an'ny iOS. Io dia ahafahanao mamorona sarimihetsika mampiasa rakitra avy amin'ny galerianao haingana be. Ny fampiharana dia manana fanangonana tahiry mozika tsara azo ampiasaina amin'ny horonan-tsarinao. Azo atao koa ny misintona mozika avy any iTunes.
Ny Splice dia manohana ny fiasa toy ny cropping video, ny sivana horonan-tsary, ny tetezamita, manampy ny fanazavana sy ny fandraisam-peo. Splice manana interface tsara kely. Ankoatr'izay, azonao atao ny mizara ny horonan-tsary farany amin'ny tambajotra sosialy na mitahiry azy amin'ny galeriana.
Fanovana horonantsary maimaim-poana
Raha mpanatontosa horonantsary voalohany ianao, raha ny momba ny fanovana horonantsary, ny fanoratana loko dia mety ho singa iray sarotra indrindra. Sintomy ireto fonosana manaraka ireto momba ny LUTs LUTs amin'ny famoronana sy fitehirizana naoty miloko, izay azo ampiasaina na ampiharina amin'ny tetikasanao.
Sintomy ny Adobe Premiere Pro Free
Adobe Premiere Pro na Premiere Elements Trial dia ny fomba tokana anananao hanafaka maimaim-poana ity rindrambaiko fanovana horonantsary matihanina ity. Azoko tsara fa te hanana zavatra mihoatra ny fahafaha-mampiasa Premiere mandritra ny 7 andro ianao, saingy io ihany no azon'ny Adobe omena anao nefa tsy mila mandoa lalàna sy mandika lalàna.
Tombontsoa maimaim-poana Adobe Premiere Pro
Sintomy ny Adobe Premiere Pro maimaim-poana